Inkolelo yezopolitiko kunye nokuSebenza kwe-Absolutism
I-Absolutism yintetho yezopolitiko kunye nohlobo lwarhulumente apho amandla angenamkhawulo, agqibeleleyo agcinwe ngumntu ongu-centralized, ngaphandle kokuhlola okanye ukulinganisela kuye nayiphi na inxalenye yesizwe okanye urhulumente. Enyanisweni, umntu olawulayo unamandla 'ngokupheleleyo,' kungekho mthethweni, ukhetho okanye enye imingeni kuloo mandla. Ngokwenza oko, iimbali-mlando zixubusha malunga nokuba iYurophu yabona nawaphi na oorhulumente bokwenene, okanye ukuba oorhulumente abathile baninzi kangakanani, kodwa eli gama lisetyenzisiwe - ngokufanelekileyo okanye ngokungalunganga - kwiinkokeli ezahlukeneyo, ukusuka kulawulo lolawulo lukaHitler kumakhosi njengoLouis XIV EFransi, kuJulius Caesar .
I-Absolute Age / Absolute Monarchies
Xa uthetha ngembali yaseYurophu, i-theory kunye nokusebenza kwe-Absolutism ngokuqhelekileyo kuthethwa ngokubhekiselele kuma-"absolutist monarchs" ekuqaleni kwexesha langoku (eli-16 ukuya kwele-18 leminyaka); kuluhlu kakhulu ukufumana nayiphi na ingxoxo yecawa ye-20 ye-dictator njenge-absolutist. Kukholelwa ukuba i-absolutism yamandulo ikhoyo kwiYurophu, kodwa ikakhulukazi entshona kumazwe afana neSpeyin, iPrussia neAustria. Kucingelwa ukuba sele ifikeleleke phantsi kolawulo lwaseFransi uKumkani uLouis XIV ukususela ngo-1643 ukuya ku-1715, nangona kukho imibono engavumiyo - njengeMettam-ebonisa ukuba le nto yayiyiphupha ngaphezu kwenyaniso. Enyanisweni, ngasekupheleni kweminyaka yee-1980, imeko yembali-nkcazo yayinjalo ukuba umbhali-mlando angabhala "... kuye kwavela isivumelwano sokuthi i-absolutist monarchies yaseYurophu ayizange iphumelele ekuzikhupheleni ekusebenziseni amandla ngamandla ..." (Miller, ed ., I-Blackwell Encyclopaedia ye-Political Thought, Blackwell, 1987, iphe.
Oko ngoku sikholelwa ngoku ukuba i-Europe e-Europe yayingabonakali - yayisadingeka iqaphele - imithetho engaphantsi kunye neofisi, kodwa igcinwe ukukwazi ukuyiqhayisa ukuba yayizuzisa ubukumkani. I-Absolutism yindlela indlela ulawulo oluphambili lunokunqumla ngayo imithetho nemimandla eyahlukileyo yemimandla eyayifunyenwe ngokugqithiseleyo kwimfazwe kunye nelifa, indlela yokuzama ukukhulisa imali kunye nokulawulwa kwala maxesha ngamaxesha ahlukeneyo.
Ama-kings of absolutist abone ukuba lo mandla ugxininisa kwaye wanda njengoko babe ngabalawuli bezizwe zanamhlanje, eziye zavela kwiindlela ezahlukeneyo zorhulumente, apho iinduna, amabhunga / amaphalamende kunye necawa bebenamagunya kwaye benza njengokuhlola, ukuba abachasene ngokucacileyo, kwi- old style-style .
Oku kwaqala ukuba yindlela entsha yombuso eye yancediswa yimithetho yerhafu entsha kunye ne-bureaucracy ephakathi ukuvumela imikhosi emileyo enokuthembela kukumkani, kungekhona izidima, kunye neengcamango zesizwe esibukhosi. Enyanisweni, iimfuno zemikhosi ekhulayo zikhona enye yeenkcazo ezithandwayo zizathu zokuthi kungani i-absolutism ikhula. AmaNobles awazange agxothwe ngaphandle kwe-absolutism kunye nokulahlekelwa kolawulo lwabo, njengoko banokuzuza kakhulu kwimisebenzi, ukuhlonipha, kunye nemali engenayo ngaphakathi kwenkqubo.
Nangona kunjalo, kukho ukuxubusha kwe-absolutism kunye neengcinga, ezingenakuziphulaphula kwezopolitiko kwiindlebe zanamhlanje. Le nto yayiyinto engama-absolutist amaxesha oorhulumente abazama ukuhlula, kwaye iimbali-mlando zanamhlanje uJohn Miller nazo zixubusha nayo, ekuphikisana nendlela esingaziqonda ngayo ngakumbi abacinga kunye nookumkani bexesha langaphambili lamanje: "Ama-monarchi aphelele awanceda ukuvelisa ingqiqo yesizwe ukuba ahlukane nemimandla , ukuseka umlinganiselo wenkqubo yoluntu kunye nokukhuthaza ukuchuma ... kufuneka ngoko ke ukuba sifunde iimbono zenkululeko kunye nentando yenkululeko yekhulu lemashumi mabini kwaye sikhe sicinge ngokobuhlwempuzekileyo kunye nobunzima, ukulindela okuphantsi kunye nokuzithoba kukuthanda kukaThixo kunye nokumkani ... "(Miller, ed., Absolutism kwi-Eyesine-Century Yurophu, iMacmillan, 1990, iphe.
Ngethuba lokukhanyiswa , amakhosi amaninzi 'angenanto' - njengoFrederick I wasePrussia, uCatherine Catherine Omkhulu waseRussia kunye nabaholi be-Austrian e-Habsburg - bazama ukuzisa ukuguqulwa kokukhanyiswa okukhanyisiweyo ngelixa beqhubeka belawula iintlanga zabo. I-serfdom yachithwa okanye iyancishiswa, ukulingana okuphakathi kwezifundo (kodwa kungekhona nenkosi) yaziswa, kwaye inkululeko yokuthetha inkululeko ivumelekile. Le ngcamango yayikukuthethelela urhulumente we-absolutist ngokusebenzisa loo mandla ukudala ubomi obungcono kwizifundo. Olu hlobo lolawulo lwaziwa ngokuba ngu-Absolutism ekhanyisiweyo. Ubukho bezinto ezikhokelayo ezikhanyisayo kule nkqubo sele zisetyenziswe njengentonga yokubetha ukukhanyiswa ngabantu abafuna ukubuyela kwiifom ezidlulileyo zempucuko. Kubalulekile ukukhumbula ukuguqulwa kwexesha kunye nokusebenzisana kwabantu.
Ukuphela kwe-Absolute Monarchy
Ubudala behlabathi lobukhosi buphela ekupheleni kwekhulu leshumi elinesibhozo neshumi elinesibhozo, njengoko ininzi yintando yeninzi kunye nokuphendula. Abaninzi ababengama-absolutist (okanye iindawo ezithile ze-absolutist) kwafuneka bakhuphe umgaqo-siseko, kodwa ookumkani baseFransi bawela nzima kakhulu, elinye lisuswe emandleni kwaye lenziwa ngexesha leNguqulelo yesiFrentshi . Ukuba ukukhanya kweengcamango kuye kwabanceda amakhosi onke, ukukhanya okucinga ukuba baye bavelisa banceda babatshabalalise abalawuli babo.
Inkolelo eqhelekileyo eyayisetyenziswa ekuxhaseni ama-kings 'american' angamaxesha amandulo 'lilungelo likaThixo lookumkani,' oluvela kwimibono yobukhosi yobukumkani. Oku kwatsho ukuba amakhoboka agcina igunya lawo ngqo kuThixo, ukuba ukumkani ebukumkanini bakhe wayefana noThixo ekudalweni kwakhe, kwaye wenza ukuba ikosikazi yama-absolutist inselele amandla ecawa, ngokuyisusa ngokuqinisekileyo njengabadlali kunye negunya ngakumbi. Kwakhona wabanika ubungqonge obuninzi bokusemthethweni, nangona kungekho nanye iyingqayizivele kwixesha lama-absolutist. Ibandla lafika, ngamanye amaxesha ngokumelene nomgwebo wabo, ukuxhasa ubukumkani obupheleleyo kunye nokuphuma kwindlela yayo.
Kwakukho uqeqesho oluthile, oluxhaswa ngabanye abafilosofi bezopolitiko, ukuba 'ngumthetho wendalo,' owawubanjwe apho kwakukho imithetho engatshintshiyo, eyenziwa ngokwemvelo eyachaphazela amazwe. Emsebenzini ngabacwaningi abanjengoThomas Hobbes, amandla amakhulu afunyanwa njengempendulo kwiingxaki ezibangelwa ngumthetho wendalo, impendulo kukuba amalungu elizwe anike inkululeko ethile kwaye abeka amandla awo ezandleni zomntu omnye ukuze alondoloze umyalelo kwaye unike ukhuseleko.
Enye into yayinobundlobongela obuqhutywe yimibutho engundoqo njengokratshi.
Imfundiso yeTruman kunye neMfazwe yeCold
Bayabaphi iMensheviks neBolsheviks?
Iimfazwe zasePersi: iMfazwe yaseMarathon
Imfazwe Yehlabathi II: Dieppe Raid
URussia - ukuphumelela
Oko Kufuneka Ukwazi Ngolawulo Lwezenkolo Zentando-ntle
IHalloween eFransi: Iindaba eziLwimi zesiFrentshi-IsiNgesi
Eyona nto ifanelekileyo kaStephen Sondheim
I-Pronoun Reference kwiNgesiNgesi ngegrama